बिष्णु बरालले श्रीमानसंग टिकटक बनाएको भिडियो बाहिरियो, बिष्णु र प्रदिपको प्रेम टिकटकमा मात्र सिमित थियो त ? फुपूलाई पक्राउ नगर्नुको कारण के हो ? (भिडियो) – Classic Khabar
June 24, 2021 110
माइती पक्षले सामाजिक सञ्जाल र युट्युवहरुमा घटनाको छानविन हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । माइतीले विवाहमा दाइजो कम भएको गुनासो विष्णुको श्रीमान र उनका परिवारले गरेको बताएकी छन् । माइती पक्षले दिएको सुन कम भएको भन्दै गुनासो गरेको विष्णुको आमाले भिडियोमा सार्वजनिक गरेकी छन् ।
Prevसन्तोषी सुब्बाको घटनामा बौद्धबाट पक्राउ परे युवक